Europe's Must See Places Of Worship | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပရဲ့ရမညျကိုးကွယ်မှုအမျိုးမျိုးကြည့်ရှုနေရာများ
ဥရောပယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းတစ်ခုခင်းကျင်းဖို့နေရာဖြစ်သည်နဲ့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာဗိသုကာ, ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သောအရပ်နှင့်တိုက်ကြီးရဲ့ကျယ်ပြန့်စုဆောင်းခြင်းမှတဆင့်ဖမ်းယူဖြစ်ပါတယ်အရှိဆုံးအရာ၏. ဒါကဘာကြောင့်ယနေ့ဖွင့်, ကျွန်တော်တက်ဝိုင်းင့်3ကျနော်တို့အကြွင်းမဲ့အာဏာမဖြစ်မနေ-ရှုမြင်ဖြစ်ခြင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်း, ဥရောပရဲ့အကျော်ကြားဆုံးမြို့ကြီးများအချို့ဖြတ်ပြီးကမ္ဘာကျော်အဆောက်အဦးများဖုံးအုပ်.
ရထားပို့ဆောင်ရေးအဆိုပါ Eco-Friendly Way ကိုရန်ခရီးသွား Is. thဆောင်းပါး Save ကိုတစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားဖြစ်ပါတယ်, ကမ်ဘာပျေါမှာစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝက်ဘ်ဆိုက်.
1. စိန့်ပေတရု၏ Basilica, ဗာတီကန်စီးတီး
ကမ္ဘာ့အသေးငယ်ဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏နံရံအတွင်းအပြင်တည်ရှိပြီး, ဗာတီကန်စီးတီး, စိန့်ပေတရု၏ Basilica ခြောလူ့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးဗိသုကာ၏ Feat နဲ့အနုပညာတစ်ခုဖြစ်တယ်. အခုတော့တစ်ဦး အဓိကဆွဲဆောင်မှု ကားပုံ 10 သန်းဧည့်သည်တစ်နှစ်, ဒီရင်သပ်ရှုမောဖွယ်စိန့်ပေတရု၏ရင်ပြင်လျစ်လျူရှုဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝါကြွားသမိုင်းဝင်အနုပညာတစ်ခုခမ်းနားထည်ဝါပေါင်းစပ်, စကျင်ကျောက်ကော်လံနှင့် Michelangelo ကဒီဇိုင်းတစ်ခုအထင်ကရ mosaic-စီတန်းမိုးခုံး (အရာသည်သင်တို့အထိပ်ကိုတက်နိုင်ပါတယ်, သင်အပေါ်ယူဝံ့သင့်တယ် 491 လမ်းတစ်လျှောက်ခြေလှမ်းများ!).
ဒီလှည့်ခရီးသည်များအကြားထိုကဲ့သို့သောလူကြိုက်များပွဲချင်းပြီးဖြစ်သော်လည်း, တစ်တင်းကျပ်စားဆင်ယင်ကုဒ်နေဆဲရှိသငျသညျသွားရောက်ခြင်းမပြုမီသတိထားဖြစ်သင့်ကြောင်းပြဌာန်း. သင်သည်တာရှည်ဘောင်းဘီရှည်ဝတ်ရမယ် (အဘယ်သူမျှမဘောင်းဘီတိုအဓိပ်ပာယျ, မသက်ဆိုင်အီတလီနေရောင်ကြောင်းကိုဘယ်လောက်ပူပြင်း၏), အမြိုးသမီးမြားပိုရှည်ဒူးအရှည်ထက်အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ခွင့်နှင့်အတူ. ပခုံးလည်းခပ်သိမ်းသောကာလမှာအားလုံးလိင်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်းကိုခံရမည်.
စိန့်ပေတရု၏ Basilica စက်တင်ဘာလမှဧပြီလ7am-7pm ကနေနေ့စဉ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အောက်တိုဘာလကနေမတ်လ7am-6pm. entry အခမဲ့ (လက်မှတ်တွေအပိုင်းများအတွက်ဝန်ခံချက်အခကြေးငွေရှိပါတယ်ပေမယ့်, ထိုကဲ့သို့သောစိန့်ပေတရု၏ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စိန့်ပေတရု၏ခုံးအဖြစ်), သို့သော်, အဆိုပါစီတန်းရှည်လျားဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိထားပါ, သင်ပထမဦးဆုံးဖြတ်သန်းဖို့ရှိသည်လေဆိပ်-စတိုင်စကင်နာများနှင့်လုံခြုံရေးကြောင့်.
2. စူလတန်အာမက်ဗလီ (အဆိုပါအပြာရောင်ဗလီ), အစ္စတန်ဘူလ်
တူရကီရဲ့ Transcontinental မွို့၌တည်ရှိသည်, အစ္စတန်ဘူလ်, အဆိုပါ Sultan Ahmed ကဗလီလေ့ရှိသောကြောင့်ယင်း၏မူထူးခြားတဲ့အပြာရောင်အတွင်းပိုင်း၏အပြာရောင်ဗလီအဖြစ်ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်. အကြားအော်တိုမန် Sultan Ahmed ကငါကတည်ဆောက် 1609 နှင့် 1616, ဒီအထင်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံမှာအဓိကခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ဝတ်ပြုမှုတစ်ခုတက်ကြွသောအရပ်နှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်ပြုမူ, ဗလီငါးပါးနေ့စဉ်ဆုတောင်းချက်တွေကိုစဉ်အတွင်း Non-ကိုးကှယျသူမှပိတ်ထားသည်အဓိပ္ပာယ် – ဆုတောငျးလကျြကြိမ်နိုင်ပါတယ် ဤနေရာတွင် check လုပ်ထား သငျသညျခရီးစဉ်မတိုင်မီ.
အားလုံးဧည့်သည်ဗလီမဝင်ခင်လိုက်နာရမယ်တဲ့တင်းကြပ်စားဆင်ယင်ကုဒ်ရှိပါတယ်. ပထမဦးစွာ, ဖိနပ်တာဝန်ခံ၏ဗလီအခမဲ့ပေးကြည်လင်သောပလပ်စတစ်အိတ်အတွင်းဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ထားရှိရပါမည် – သငျသညျထို့နောက်အခန်းကျအပေါက်၌သင်တို့၏ဖိနပ်စွန့်ခွာရန်အ option ရှိသည်သို့မဟုတ်သင်နှင့်အတူအိတ်သယ်ဆောင်. အခါသင့်ရဲ့အဝတ်အစားမှကြွလာ, ယောက်ျားချောင်အဝတ်အဘို့အရွေးချယ်နှင့်၎င်းတို့၏ခြေထောက်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်သေချာသင့်ပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောအင်္ကျီနှင့်ဘောင်းဘီတိုအဖြစ်ကိုရှောင်ရှားပစ္စည်းများ. အမျိုးသမီးများနေ့လည်းလျော့ရဲရဲ-သငျ့အဝတ်အစားဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်, သူတို့ရဲ့လက်နက်သေချာစဉ်, ခြေထောက်, နှင့်ဆံပင်အားလုံးအချက်များမှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်. အမြိုးသမီးမြားလာသောအခါအတွင်း၌တစ်ပုဝါဝတ်ဆင်ရန်မျှော်လင့်ထားကြသည်သောဤနည်းလမ်းများနှင့်, ဒီအများကြီးမဟုတ်သောမွတ်စလင်အနောက်တိုင်းဧည့်သည်များအတွက်အသစ်တစ်ခုအယူအဆဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်, ကျွန်တော်လေ့လာသင်ယူဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ် ဘယ်လောက်မှန်မှန်ကန်ကန်ဒီကျိုးနွံအဝတ်အစားမရှိမဖြစ်ဝတ်ဆင်ရန် သငျသညျခရီးသွားမတိုင်မီ.
entry အခမဲ့ (အဆောက်အဦး၏အထွေထွေ upkeep အထောက်အကူပြုဖို့သေးငယ်တဲ့လှူဒါန်းမှုထွက်ပေါက်အပေါ်သို့အားပေးတိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်) နှင့်, အထဲမှာတခါ, flash ကိုနှင့်အတူဓာတ်ပုံခွင့်ပြုထားသည်, သင်ဗလီရဲ့အထင်ကြီးအတွင်းပိုင်း၏ SNAP များများယူအခမဲ့နေအဓိပ်ပာယျ. သဘာဝကျကျ, ပြောစရာမလိုအောင်ဟုတ်မှန်နေသည်, အဆိုပါ Sultan Ahmed ကဗလီနေဆဲဝတ်ပြုမှုတစ်ခုတက်ကြွသောအရပ်ဖြစ်သကဲ့သို့ကြောင်း, သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းတိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်အဆောက်အဦးများနှင့်မဆိုကိုးကှယျသူနှစ်ဦးစလုံး၏လေးစားမှုဆက်လက်တည်ရှိရန်သေချာစေပါ.
3. အဆိုပါ Sagrada Familia Basilica, ဘာစီလိုနာ
la Sagrada Familia Basilica တစ်ခုအထင်ကရစပိန်မြေမှတ်တိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်, ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းအဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ဆဲနေဆဲဖြစ်ပါသည် – အလုပ်စတင်ပေမယ့် 1882, ဒါကြောင့်လက်ရှိချိန်အထိပြီးစီးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်မ 2026! မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ဒီ Semi-ပြည့်စုံရိုမန်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းပြီးသားအနေနဲ့ဗိသုကာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့ကနေဧည့်သည်များအတွက်တာတော့သေချာတယ်မဖြစ်မနေ-မြင်ဆွဲဆောင်မှုအောင်.
19 ရာစုကတည်းက churchgoers နှင့်ဧည့်သည်များမှပွင့်လင်း, သငျသညျလက်ခံတွေ့ဆုံအဆိုပါ Sagrada Familia Basilica 4.5 သန်းဧည့်သည်များနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းယခုရလဒ်ကဲ့သို့လက်မှတ် entry ကို system ကိုလည်ပတ် – ဤအအွန်လိုင်းကိုဝယ်ခြင်းငှါရရှိနိုင်ပါသည် သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်၏နေ့စွဲမတိုင်မီနှစ်လအထိ. တို့အတွက်လျှော့ချတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်သတ်မှတ် entry ကိုကြိမ်ပေါ်ဤအကြောင်းလက်မှတ်တွေအလုပ်, သို့သော်, သငျသညျနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်အထင်ကြီးအတွင်းပိုင်းတွေရဲ့ရန်ချင်ပါတယ်အဖြစ်ဖြုန်းဖို့သငျသညျအထဲမှာနေအခမဲ့အနေဖြင့်တစ်ချိန်က. ကျနော်တို့အနည်းဆုံးခွင့်ပြုအကြံပြု2စနစ်တကျဒီဗိသုကာအံ့သြစရာအတွက်ယူနာရီ. အသင်းတော်ဝန်ဆောင်မှုတက်ရောက်ရန်ရှာဖွေနေဧည့်သည်များအတွက်, အစုလိုက်အပြုံလိုက်တိုင်းစနေနေ့နင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမနက်9နာရီမှာကျင်းပနှင့်ည 8 နာရီမှာဖြစ်ပါတယ်, ရေရှည်တည်တံ့ 1 အတော်ကြာဘာသာစကားများကောက်ယူနာရီနှင့်ဖြစ်လျက်ရှိ.
la Sagrada Familia Basilica တရားဝင်ရိုမန်ကက်သလစ်အသင်းတော်တို့အားများအတွက်စံစားဆင်ယင် code ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော, သို့သော်, က Sultan Ahmed ကဗလီသို့မဟုတ်စိန့်ပေတရု၏ Basilica မှာဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းဤတင်းကြပ်စွာပြဌာန်းကဲ့သို့ဖြစ်ရလေ့မရှိပေ. ဤသည်ကဆိုပါတယ်ခံရ, ဒါကြောင့်အခါတိုင်းတတ်နိုင်သမျှဒီစားဆင်ယင် code ကိုလိုကျနာဖို့နေဆဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံချက်င်, သငျသညျ entry ကိုအပေါ်သို့မ headwear ဖယ်ရှားပစ်သင့်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်, သင့်ရဲ့ပခုံးကိုဖုံးသောသင့်လျော်သောအထက်ခန္ဓာကိုယ်အဝတ်အစားဝတ်ဆင်, ပြန်., နှင့် midriff နှင့် wear ပေါင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြောင်းအဖုံးများ legwear.
ဥရောပအများအပြားမှနေရာဖြစ်သည် လှပသောသောနေရာများ အမှန်ဗိသုကာများ၏ပြိုင်ဘက်ကင်းတန်ခိုးနှင့်ဘာသာရေးလှုံ့ဆော်မှု encapsulate ကြောင်းဝတ်ပြုမှု. ထိုအစက်အပြောက်ဦးပထမဦးဆုံးလက်တွေ့မြင်မှ, ရထားအားဖြင့်တိုက်ကြီးခရီးသွားလာခြင်းနှင့် အတူစာအုပ် တစ်ဦးကရထား Save to leave no stone upturned across Europe’s many sights and attractions.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “3 ကိုးကွယ်မှု၏ဥရောပရဲ့ရမညျ-ကြည့်ရှုနေရာများ၏” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-places-worship%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သငျသညျအထကျက link နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့စာမျက်နှာသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်ခြင်းသို့မဟုတ် embed.ly link ကိုသုံးနိုငျ.
အောက်ပါလင့်ခ်များတွင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, ဒီ link ကိုစာမျက်နှာများတွင်လေယာဉ်ဆင်းသက်အင်္ဂလိပ်လမ်းကြောင်းများအဘို့ဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ fr သို့မဟုတ်က de ဖို့ TR ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်သင့်ရွေးချယ်ပိုမိုဘာသာစကားများနိုင်ပါတယ်.
LaSagradaFamilia Mosque ရထားခရီးသွား traveltips vaticancity worship